आखिर ‘पद्मावती’ स्क्रीनिङमा बिरोध किन ? « Mazzako Online
आखिर ‘पद्मावती’ स्क्रीनिङमा बिरोध किन ?
संजय लीला भंसालीको फिल्म ‘पद्मावती’ को पोस्टर रिलिज पछि अझै चर्चा चुलिएको छ । राजपुत समुदायको संगठन श्री राजपुत करणी सेनाले यदि ‘पद्मावती’ मा तथ्यलाई विकृत रुपमा प्रस्तुत गरिएको भए विरोध गर्ने जनाएको छ । उक्त संगठनले फिल्म स्क्रीनिङमामा समेत बिरोध गर्ने जनाएको छ ।
फिल्मको शुटिङको समय जवारीमा करणी सेनाको कार्यकर्ताले पद्मावतीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुब्र्यवहार गरेका थिए भने शुटिङको सबै सामान क्षति भएको थियो । उनीहरुले कुनै पनि हालतमा फिल्ममा तथ्यलाई विकृत गरेर प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् ।
फिल्ममा अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले चित्तौढकी रानी पद्माको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । फिल्ममा रणवीर सिंहले अलाउदिन खिलजीको भूमिकामा निभाएका छन् भने शाहिद कपुर रानी पद्यमावतीको श्रीमान् राजा रनतसिंहको भुमिकामा छन् ।